Diiwaanka | SAMP
Cusbooneysii Oktoobar 2021
Dekedda Seattle waxay sii wadaysaa hawsheeda si ay u dhammaystirto dib-u-eegista bay'ada ee Mashruuca Maaraynta Madaarka Joogtada ah (SAMP) ee Mashaariicda Waqtiga-dhow (NTP). Siidaynta falanqaynta ugu horraysa ee deegaanka - qabyo -qoraalka Xeerka Siyaasadda Deegaanka Deegaanka (NEPA) Qiimaynta Deegaanka (EA) - ayaa qaadanaysa waqti dheeraad ah sababtuna tahay baahida loo qabo falanqayn dheeraad ah.
Dekedda, iyada oo lala kaashanayo Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka (FAA), waxay bixin doontaa cusboonaysiin dheeraad ah ka hor inta aan la siidayn qabyo -qoraalka NEPA EA ee wakaaladda iyo faallada dadweynaha.
Marka dib u eegista deegaanka NEPA ay dhammaato, sharciga siyaasadda deegaanka ee gobolka (SEPA) dib u eegista deegaanka ayaa raaci doona. Oggolaanshaha guddiga ayaa loo baahan yahay si loo bilaabo shaqada mashaariicda gaarka ah.
U cusbooneysii JULY 2020
Jadwalka dib-u-eegista deegaanka ee Joogtada ah ee Mashruuca (SAMP) Mashruucyada u dhow (NTP) dib baa loo dhigay natiijada cudurka COVID-19 ee faafa. Dib udhaca waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo awooda martigelinta shirarka dadweynaha ee wax ku oolka ah oo nabdoon, waxaana kujira qeyb ahaan dib udhaca kharashaadka sanadka 2020. Sii deynta falanqaynta ugu horeysa ee dib u eegista deegaanka, qabyo qoraalka NEPA Deegaanka (EA), iyo la socoshada dadweynaha, hadda waxay dhici doontaa rubuca koowaad ee 2021. Dekedda waxay sii wadaa inay sifeyso jadwalka faahfaahsan.
Qorshaha guud waa tallaabo lagama maarmaan u ah mustaqbalka garoonka diyaaradaha caalamiga Seattle-Tacoma (SEA). Dekeddu waxay sii wadaysaa shaqadii lagu dhammaystirayay dib-u-eegista deegaanka ee SAMP NTP. Marka dib u eegista deegaanka la dhammeeyo, oo la filayo 2021, Oggolaanshaha Guddiga ayaa loo baahan yahay si loo bilaabo mashruuc kasta oo shakhsi ah.
Cusboonaysii SIDII JANAAYO 2020
Dekedda Seattle iyo FAA waxay wadaan dib-u-eegis bay'adeed ee Mashaariicda SAMP-ku-dhow.
Saadaalinta iyo cusbooneysiinta jadwalka.
Iyada oo qayb ka ah geeddi-socodka dib-u-eegista bay'ada ee SAMP Projects-Term Term (NTP), Dekedda Seattle waxay dib-u-eegis ku samaysay saadaashii duulimaadkii hore ee loo diyaariyey SAMP si loo fahmo haddii saadaasha hawlaha mustaqbalka ay sii ahaanayaan kuwo ansax ah. Iyada oo ku saleysan xogta waxqabadka sanadlaha ah ilaa iyo 2015, kobaca dhabta ahi wuxuu aad uga badan yahay koritaanka la saadaaliyay hab la arki karo. Sidaas darteed, Dekedda Seattle waxay qaadday cusboonaysiinta saadaasha si ay si fiican uga tarjunto koboca xooggan ee la arkay. Cusboonaysiinta saadaasha ayaa ahayd mid aan xakamayn, taasoo la micno ah inay saadaalisay koboc kaliya ku salaysan baahida suuqa ee socdaalka hawada ee/ka imanaya Seattle, iyada oo aan tixgelinayn caqabadaha kale ee xagga hawsha. Falanqayn dheeraad ah oo ku saabsan kobaca la saadaaliyay ee la cusbooneysiiyay, iyo heerarka dib u dhaca, ayaa tilmaamay in iyada oo aan la dhisin tas -hiilaad cusub, ay u badan tahay in gegida dayuuradaha ay la kulmaan hoos u dhac weyn oo ku yimaada heerka kobaca 2023 ka dib. tas -hiilaadka, waxaa lagu tilmaamaa jawi hawlgal oo xaddidan.
Dekedda Seattle waxay tixgelisay arrimahan markii ay horumarinaysay heerka howlaha iyo rakaabka ee dib-u-eegista deegaanka ee SAMP. Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa hawlgallada aan la xakamayn ee la saadaaliyay iyo rakaabka ka soo cusboonaysiinta ugu dambaysay, marka loo eego heerka xaddidan ee hawlgallada iyo rakaabka loo isticmaali doono dib u eegista deegaanka ee SAMP NTP.
Jadwalka la kordhiyay
Cusboonaysii SIDDII Diseembar 2019
Bishii Diseembar 2019 muddada dib -u -eegista deegaanka ayaa la kordhiyay si loogu daro jawaab -celinta la maqlay intii lagu jiray xilliga baaxadda deegaanka. Dib -u -eegista bay'ada waxaa ku jiri doona mowduucyo dheeraad ah oo dadwaynuhu ay kiciyeen intii lagu jiray xilliga kala -soocidda, la cusbooneysiiyo saadaasha dalabka 2014 si loo muujiyo koritaanka degdegga ah ee dhacay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, oo si dhammaystiran oo taxane ah loo dhammaystiro falanqaynta NEPA iyo SEPA.
U cusboonaysii SIDDII FEBRUARY 2019
Waad ku mahadsan tihiin dhammaan soo dhammaystiray soo gudbinta wakaaladda iyo faallooyinka dadweynaha intii lagu gudajiray mashruucyada SAMP ee Muddo-dhow, oo xirmay Sebtember 28, 2018. Maamulka Duulista Federaalka (FAA) iyo Dekedda Seattle waxay u qaataan faallooyin kasta si dhab ah oo ay ugu riyaaqaan dadaallada hay'ad kasta iyo shaqsi kastaa waxay qaateen inay kaqaybqaataan.
FAA waxay bilawday Xeerka Nidaamka Siyaasadeed ee Deegaanka Deegaanka (NEPA) Qiimaynta Deegaanka (EA) iyo Dekedda Seattle (Port) waxay bilaabeen Xeerka Siyaasadda Deegaanka ee Gobolka (SEPA) Bayaanka Saamaynta Deegaanka (EIS) si loo qiimeeyo loona muujiyo saamaynta deegaanka ee -Mashruucyada Muddada.
Faallooyinka la helay intii lagu jiray xoqidda ayaa dib loo eegay waana la tixgelin doonaa inta lagu jiro falanqaynta deegaanka. Dekedda Seattle iyo la-taliyaheeda, oo ay weheliso FAA, waxay hadda wadaan falanqaynta deegaanka.
FAA iyo Dekeddu waxay soo saari doonaan laba dukumiinti oo kala duwan, iyada oo FAA's NEPA EA ay imaaneyso go'aanka koowaad ee deegaanka; oo ay ku xigto Dekedda SEPA EIS. Waxaa jiri doona wakaalad iyo dib u eegis dadweyne iyo waqti faallooyin labada dukumiinti ah.
Maaddaama Dekedda iyo FAA ay sii marayaan falanqaynta deegaanka oo ay si fiican u fahmayaan waqtiga dukumiintiyada deegaanka qabyada ah, Dekedda waxay ku siin doontaa cusbooneysiin ku saabsan waqtiga iyo tallaabooyinka xiga ee boggan.